U disk ayaa si lama filaan ah u baaba'ay intii la isticmaalayay - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>U disk ayaa si lama filaan ah u baaba'ay intii la isticmaalayay
U disk ayaa si lama filaan ah u baaba'ay intii la isticmaalayay
Faylasha ku jira U disk si lama filaan ah ayaa la waayey intii la isticmaalay, waxaan aaminsanahay in isticmaaleyaal badan ay la kulmeen xaalado la mid ah, markaa, U diskka. Maxaa dhacay markii dukumintiga si lama filaan ah u lumay? Faylasha ka maqan diskka USB ma laga soo kaban karaa? Hoosta, tifatiraha ayaa kaala hadli doona sida dib loogu soo celiyo faylasha si lama filaan ah uga baaba'ay diskka U. Waa maxay sababaha ugu badan ee faylalka ku jira diskka U ay u maqan yihiin? Bulshada casriga ah, U disk-ga ayaa ah aaladda ugu badan ee xogta lagu keydiyo. Sikastaba ha noqotee, astaamahan 'diskka U' awgood awgood, U diskka mararka qaar waxay yeelan doonaan dhibaatooyin qaar waqti ka waqti.Tusaale ahaan, feylasha kujira wadnaha U disk ayaa si lama filaan ah u baaba'aa oo baaba'aa. Dukumentiyada way baxeen. Xaaladdaani waa iska caadi, laakiin sababta dhibaatadan ayaanan la xallin, Tifatiraha halkan wuxuu ku soo koobayaa qaar ka mid ah sababaha ugu caansan ee tixraacaaga. Faylka waa qarsoon yahay: Hubi sifooyinka kombiyuutarka U disk-ka kombiyuutarka Haddii ay jirto meel xog ku haysa, laakiin aan faylka muuqan, markaa faylka waa la qarin karaa. Khasaaraha faylka: Waxaa jira sababo badan oo luminta xogta, sida tirtirka, qaabka, fayraska kombiyuutarka, iwm. Haddii aad ogaato in faylka lumay, si dhakhso leh u jooji qoraalka qorista si aad uga ilaaliso inuu wax ku qoro xogta lumay. diskiga 'U disk' wuu jabay: diskka xusuusta, xakameynta ugu weyn, iwm. waxyeelloobey. Feylasha ku jira barnaamijka disk-ga U ayaa la waayey habka dib u soo celinta mid ka mid ah: soo bandhig faylasha qarsoon, faylalka iyo wadayaasha
Qaabkani wuxuu ku habboon yahay soo celinta feylasha qarsoon. Haddii faylasha ku lumay diskka U aan la qarin, fadlan tixraac Habka 2 si aad u soo ceshato faylasha maqan; tababarkan wuxuu adeegsanayaa nidaamka Windows 10. Howlaha gaarka ah ee noocyada kale ee Windows ee nidaamka ayaa laga yaabaa inay xoogaa ka yara duwan yihiin, laakiin isku mid. Halkan kuma lihi tusaale. Tallaabada ugu horreysa: ku xir kombuyutarka U disk-ga kumbuyuutarka, ka dibna laba jeer guji "kumbuyuutar" aaladda desktop-ka si aad u furto faylka baaraha. Tallaabada 2: Raadi warqadda wadista USB flash Drive-ka ee ku dhex yaal faylka sahaminta oo laba jeer guji warqadda wadista si aad u furto USB flash drive-ka. Tallaabada 3: Guji "View" tab on bar bariga menu, ka dibna iska hubi ikhtiyaarka "Waxyaabaha Qarsoon". Faylasha ku jira U disk-ga ayaa la la’yahay habka dib u soo kabashada 2: U adeegso barnaamijka kumbuyuutarka kabista xogta U disk-ga si aad u soo ceshato faylasha lumay
Haddii faylasha ka lumay diskiga U iyo Haddii aan la qarin, waxaa loo tirtiri karaa qalad .. Xaaladdan oo kale, waxaad isku dayi kartaa inaad u isticmaasho softiweerka soo kabashada xogta ee soo kabashada faylka. Markaas faylka U diskku meesha ka baxo, waa maxay barnaamijyada soo kabashada xogta ee ka fiican?
PreQaybtan soo kabashada barnaamijka
NextSoo kabasho xoog leh nooca faylka ah ee U disk